Fiozao ny ora UTC -6
Tonga teo amin'ny faritan'i Costa Rica i Christophe Colomb tamin'ny 1502. Teo aorian'izany, ny Kapteneria Jeneralin'i Guatemala ho an' Espaina ny Costa Rica. Nahazo fahaleovantena tamin'ny 1821 ilay firenena, ary nipetraka avy hatrany ny demokrasia.
Nanomboka tamin'ny 1843 ny fambolena ny kafe. Tamin'ny 1869, tereina ary tsy andoavam-bola ny fampianarana. Miady ho an'ny fanitaran'io sistema io ny ministeran'ny fampianarana. Araka ny heviny, tsy maintsy mahay mamaky teny, manoratra sy manisa ny tsirairay. Noraràna tamin'ny 1882 ny sazy mahafaty
Tamin'ny 1948, nisy ady an-trano nanozongozona ilay firenena, noho ny tsy fiaiken'ny fandresen' Otilo Ulate Blanco, olona arivo eo ho eo no maty mandritran'io ady io. Nesorina tamin'ny 1949 ny tafika, lasa anisan'ny firenena tsy manan-tafika ny Costa Rica amin'izao fotoana izao.
sokajy Costa Rica ao amin'ny dmoz
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Costa_Rica&oldid=767871"
Voaova farany tamin'ny 18 Aprily 2015 amin'ny 08:03 ity pejy ity